Numeri 16 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Kora, Datan, ne Abiram atuatew (1-19)
Atemmu a ɛbaa atuatewfo no so (20-50)
16 Na Kora+ a ɔyɛ Lewi+ ba Kohat+ ba Yisar+ ba no sɔre gyinae, ɔne Eliab+ mma Datan ne Abiram, ne Pelet ba On a wofi Ruben+ abusuakuw mu no. 2 Wɔne Israelfo mmarima a wɔyɛ bagua no mu mpanyimfo, mmarima 250 a wɔayi wɔn wɔ asafo no mu a wɔwɔ din sɔre tiaa Mose. 3 Wɔboaa wɔn ano kɔɔ Mose ne Aaron so,+ na wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Yɛabrɛ mo! Asafo yi nyinaa nso yɛ nnipa kronkron,+ obiara yɛ kronkron, na Yehowa wɔ wɔn mu.+ Adɛn nti na ɛsɛ sɛ moma mo ho so wɔ Yehowa asafo so saa?” 4 Bere a Mose tee saa no, ɛhɔ ara na ɔde n’anim butuw fam. 5 Afei ɔka kyerɛɛ Kora ne n’akyitaafo no nyinaa sɛ: “Ɔkyena anɔpa Yehowa bɛkyerɛ nea ɔyɛ ne dea,+ ne nea ɔyɛ kronkron, ne nea ɛsɛ sɛ ɔba n’anim,+ na nea obeyi no no,+ ɔno na ɔbɛba n’anim. 6 Nea monyɛ ni: Kora, wo ne w’akyitaafo nyinaa,+ momfa kankyee a wɔde ogya gu mu,+ 7 na momfa ogya ngu mu, na momfa aduhuam ngu so, na momfa mmra Yehowa anim ɔkyena, na nea Yehowa beyi no no,+ ɔno na ɔyɛ kronkron. Afei de, aboro so, Lewi mma!”+ 8 Na Mose ka kyerɛɛ Kora sɛ: “Lewi mma, mepa mo kyɛw, muntie. 9 Mohwɛ a ɛyɛ ade ketewa sɛ Israel Nyankopɔn no ayi mo afi Israel asafo mu+ sɛ mommra n’anim mmɛyɛ adwuma wɔ Yehowa som ntamadan mu na munnyina asafo no anim nsom wɔn?+ 10 Ɛyɛ ade ketewa sɛ wama wo ne wo nuanom Lewifo no abɛn no? Ɛnna eyi nyinaa akyi, moresan apɛ asɔfodi no?+ 11 Ɛno nti, wo ne w’akyitaafo a moaboa mo ano no nyinaa asɔre atia Yehowa. Aaron de, dɛn na wayɛ a enti munwiinwii tia no?”+ 12 Akyiri yi, Mose soma kɔfrɛɛ Eliab mma Datan ne Abiram+ sɛ wɔmmra, nanso wɔkae sɛ: “Yɛremma baabiara! 13 Woayi yɛn afi asaase a nufusu ne ɛwo abu so wɔ so no so sɛ yemmewuwu wɔ sare so.+ Wohwɛ a ɛyɛ ade ketewa? Afei de, wopɛ sɛ wode yɛn yɛ nkoa na wudi yɛn so woahu?* 14 Yɛreka yi koraa, womfaa yɛn mmaa asaase a nufusu ne ɛwo abu so wɔ so+ biara so, na wommaa yɛn asaase ne bobefuw* agyapade biara. Adɛn, wopɛ sɛ wututu mmarima no ani anaa? Yɛremma baabiara!” 15 Enti Mose bo fuwii paa, na ɔka kyerɛɛ Yehowa sɛ: “Ntwa w’ani nhwɛ wɔn aduan afɔre. Minnyee afurum baako mpo mfii wɔn hɔ, na menyɛɛ wɔn mu biara bɔne nso.”+ 16 Ɛnna Mose ka kyerɛɛ Kora sɛ: “Wo ne w’akyitaafo nyinaa mmra Yehowa anim ɔkyena, wo ne wɔn ne Aaron. 17 Obiara mfa ne kankyee a wɔde ogya gu mu na ɔmfa aduhuam ngu so, na obiara mfa ne kankyee a wɔde ogya gu mu no mmra Yehowa anim, kankyee a wɔde ogya gu mu 250. Na wo ne Aaron nso, obiara mfa ne kankyee a wɔde ogya gu mu mmra.” 18 Enti obiara faa ne kankyee a wɔde ogya gu mu, na wɔde ogya ne aduhuam guu mu, na wobegyinaa ahyiae ntamadan no ano, wɔne Mose ne Aaron. 19 Bere a Kora boaa n’akyitaafo+ ano kɔɔ ahyiae ntamadan no ano no, Yehowa anuonyam daa adi maa asafo no nyinaa hui.+ 20 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ: 21 “Montwe mo ho mfi saa nkurɔfo yi ho, na menhyew wɔn ase seesei ara.”+ 22 Bere a wɔtee saa no, wɔde wɔn anim butubutuw fam, na wɔkae sɛ: “O, Onyankopɔn, Onyankopɔn a woma nnipa nyinaa nkwa,*+ onipa baako bɔne nti, wobɛma w’abufuw aba asafo yi nyinaa so anaa?”+ 23 Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: 24 “Wo ne asafo no nkasa, na ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Mumfi Kora ne Datan ne Abiram+ ntamadan ho!’” 25 Ɛnna Mose sɔree, na ɔkɔɔ Datan ne Abiram nkyɛn, na Israel mpanyimfo no+ ne no kɔe. 26 Na ɔka kyerɛɛ asafo no sɛ: “Mepa mo kyɛw, montwe mo ho mfi nnipa abɔnefo yi ntamadan ho. Mommfa mo nsa nnka wɔn biribiara, na wɔn bɔne no nti wɔampra mo ankɔ.” 27 Na ntɛm ara na wɔtwee wɔn ho fii Kora ne Datan ne Abiram ntamadan no ho baabiara. Na Datan ne Abiram pue begyinagyinaa wɔn ntamadan ano, wɔne wɔn yerenom ne wɔn mma mmarima ne wɔn mma nketewa nyinaa. 28 Afei Mose kae sɛ: “Eyi na ɛbɛma moahu sɛ Yehowa na wasoma me sɛ menyɛ eyinom nyinaa, na ɛnyɛ me ara:* 29 Sɛ nnipa yi wu* sɛnea nnipa nyinaa wu, na sɛ asotwe a ɛbɛba wɔn so no yɛ nea ɛba nnipa nyinaa so no bi a, ɛnde na ɛnyɛ Yehowa na wasoma me.+ 30 Na sɛ Yehowa ma biribi a ɛyɛ nwonwa ba wɔn so, na asaase mu bue,* na ɛmene wɔne nea wɔwɔ nyinaa ma wɔkɔ Ɔdamoa* mu anikan a, ɛhɔ na mubehu sɛ ampa, nnipa yi ayɛ aniammɔnho akyerɛ Yehowa.” 31 Bere a ɔkaa asɛm yi nyinaa wiei pɛ na asaase a wogyina so no mu paee.+ 32 Na asaase no mu buei,* na ɛmenee wɔne wɔn fifo ne Kora ho nipa biara+ ne wɔn agyapade nyinaa. 33 Enti wɔne wɔn a ɛka wɔn ho nyinaa sian kɔɔ Ɔdamoa* mu animono, na asaase kataa wɔn so ma wɔyera fii asafo no mu.+ 34 Bere a wɔreteɛteɛm no, Israelfo a ɛbɛn wɔn no nyinaa guan fii hɔ, na wɔkae sɛ: “Yesuro sɛ anhwɛ a na asaase amene yɛn nso!” 35 Ɛnna ogya fi Yehowa hɔ bae,+ na ɛhyew mmarima 250 a na wokurakura aduhuam no.+ 36 Na Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: 37 “Ka kyerɛ ɔsɔfo Aaron ba Eleasar sɛ onyiyi nkankyee a wɔde ogya gu mu no+ mfi ogya no mu, efisɛ ɛyɛ kronkron. Afei nso, ka kyerɛ no sɛ ompiapia ogya no mfi ho nkɔ akyiri. 38 Ma wɔmfa nkankyee a wɔde ogya gu mu a na ekurakura nnipa a wɔyɛɛ bɔne* ma wowuwui no, na wɔnyɛ no ntraantraa mfa nkata afɔremuka no ho.+ Esiane sɛ wɔde baa Yehowa anim nti, abɛyɛ ade kronkron. Ma ɛnyɛ sɛnkyerɛnne mma Israelfo no.”+ 39 Enti ɔsɔfo Eleasar faa kɔbere nkankyee a wɔde ogya gu mu no, nea nnipa a wɔhyewee no de bae no, na ɔbobɔɔ so de kataa afɔremuka no ho, 40 sɛnea na Yehowa nam Mose so aka akyerɛ no no. Ɛyɛ biribi a na ɛbɛkae Israelfo no sɛ, ɛnsɛ sɛ obi a wɔmmaa no kwan,* kyerɛ sɛ, obi a omfi Aaron abusua mu hyew aduhuam wɔ Yehowa anim.+ Afei nso, na ɛbɛkae wɔn na obiara anyɛ sɛ Kora ne n’akyitaafo no.+ 41 Nanso ade kyee ara na Israel asafo no nyinaa fii ase nwiinwii tiaa Mose ne Aaron+ sɛ: “Mo baanu na moakum Yehowa nkurɔfo.” 42 Bere a asafo no boaa wɔn ano baa Mose ne Aaron so no, wɔde wɔn ani kyerɛɛ ahyiae ntamadan no. Na hwɛ! na omununkum no akata so, na Yehowa anuonyam fii ase daa adi.+ 43 Afei Mose ne Aaron begyinaa ahyiae ntamadan no anim.+ 44 Na Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: 45 “Montwe mo ho mfi asafo yi ho na menhyew wɔn ase seesei ara.”+ Ɛnna wɔde wɔn anim butubutuw fam.+ 46 Afei Mose ka kyerɛɛ Aaron sɛ: “Fa kankyee a wɔde ogya gu mu no, na yi afɔremuka no so gya no+ bi gu mu na fa aduhuam gu so, na yɛ ntɛm kɔ asafo no nkyɛn kɔpata ma wɔn,+ efisɛ Yehowa bo afuw. Ɔhaw no afi ase!” 47 Ɛhɔ ara na Aaron kɔfaa kankyee a wɔde ogya gu mu no, sɛnea Mose kae no, na otuu mmirika kɔɔ asafo no mu. Na hwɛ! na ɔhaw no afi ase dedaw. Enti ɔde aduhuam no guu kankyee no mu hyew de pata maa ɔman no. 48 Na ogyinaa wɔn a wɔawu ne wɔn a wonwui no ntam, na afei de, ɔhaw no gyaee. 49 Nnipa a ɔhaw a ɛbae no kunkum wɔn no nyinaa yɛ 14,700. Wɔn a Kora asɛm no nti wowuwui no nka ho. 50 Bere a Aaron san baa Mose nkyɛn wɔ ahyiae ntamadan no ano no, na ɔhaw no agyae.
^ Anaa “wopɛ sɛ wohyɛ yɛn so.”
^ Nt., “woyɛ ɔhonam nyinaa ahonhom Nyankopɔn.”
^ Anaa “ɛnyɛ me ara me koma.”
^ Anaa “Sɛ nnipa yi to wɔn kɔn wu.”
^ Nt., “asaase bue n’anom.”
^ Nt., “asaase buee n’anom.”
^ Anaa “wɔyɛɛ wɔn ankasa kra bɔne.”
^ Nt., “ɔyɛ ɔhɔho.”